यी हुन् सर्वाधिक राजस्व उठाउने ५ भन्सार कार्यालय
२०७५ श्रावण २२, मंगलबार
काठमाडौं–सरकारले लक्ष्य भन्दा ९ अर्ब ६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको छ ।
विभिन्न भन्सार कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्षमा (२०७४/७५) भन्सार महसुल, मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तशुल्क गरी ३ खर्ब २५ अर्ब ७२ करोड ३० लाख ३८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेपनि ३ खर्ब १६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको हो ।
भन्सार विभागका अनुसार यो लक्ष्यको ९७.२२ प्रतिशत हो । यद्यपि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४.४० प्रतिशत बढी राजस्व उठेपनि लक्ष्य भन्दा कम हो । भन्सार कार्यालयले अघिल्लो वर्ष भन्दा ३२ प्रतिशत बढी राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
महत्वकांक्षी लक्ष्यका कारण राजस्व संकलनले लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको जनाएको छ । सबैभन्दा बढी राजस्व वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले उठाएको छ । यहाँबाट १ खर्ब २८ अर्ब ३९ करोड ३ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको हो । तर, यस कार्यालयबाट १ खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा यसले पनि लक्ष्य भने भेट्टाउन सकेन ।
सर्वाधिक राजस्व उठाउने पाँच वटा भन्सार कार्यालय
विभागका अनुसार विरगन्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय, विराटनगर भन्सार कार्यालय, सुख्खा बन्दगाह र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सर्वाधिक राजस्व उठाएका छन् ।
जसअनुसार विरगन्ज भन्सार कार्यालयले १ खर्ब २८ अर्ब ३९ करोड ३ लाख ८ हजार रुपैयाँ , भैरहवा भन्सार कार्यालयले —७१ अर्ब ४४ करोड ४१ लख २४ हजार रुपैयाँ, विराटनगर भन्सार कार्यालयले ३२ अर्ब ८१ करोड ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, सुख्खा बन्दगाहले २७ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले १८ अर्ब १० करोड १७ लाख ८३ रुपैयाँ राजस्व उठाएको हो ।
लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व उठाउने भन्सार कार्यालय
लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व उठाउनेमा जाँचपास परिक्षण कार्यालय रहेको छ । यसले लक्ष्य भन्दा ३१२.४८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । यो कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २५२.१५ प्रतिशत बढी हो । जाँचपास परीक्षण कार्यालयले २६ करोड ७० लाख ८१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
यसले ८ करोड ५४ लाख ७१ ह्जार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यता सुनसरी भन्सार कार्यालयले १७९.५८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । यसले २४ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो ।
विराटनगर भन्सार कार्यालय, मेची भन्सार कार्यालय, जनकपुर भन्सार कार्यालय, जलेश्वर भन्सार कार्यालय, कृष्णनगर भन्सार कार्यालय, कैलाली भन्सार कार्यालय, कंचनपुर भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका छन् ।
शेर्पखबरका अन्य लेख तथा रचनाहरु
ससफो सोलु–काठमाडौं सम्पर्क समितिमा ‘प्रश्न खालिङ’
रेस्टुरेन्टमा एक्स्ट्रा ‘भ्याट’ र ‘सर्भिस चार्ज’ ? सरकार भन्छ नतिर्नुस्
खुम्बुमा कृषि औजार वितरण
मन्त्रीको हातमा म्याकबुक, आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठक कागजबिहीन !
विद्युत प्राधिकरणको खुद नाफा एक अर्ब, विद्युत चुहावट २० प्रतिशतमा झर्‍यो
उज्जन बुढाथोकीको संयोजकत्वमा चम्पादेबीका विद्यालय अनुगमन